2021 I-PVC ye-PVC ye-lelebheli yelebheli yelebheli irabha irabha ye-ratchain ozenzekelayo | I-Weldo jewelry e-Inamel yoMthengisi
Ukufakela ingqondo namehlo kumatshini
Umatshini we-rabbel wenza umatshini ozenzekelayo
I-desktop i-pvc ithambileyo yelebhile
I-PVC ethe nkqo ye-PVC yeleyili
I-crystial ebonakalayo yokucoca
Umgca ozenzekelayo ozenzekelayo
Umatshini obonakalayo obonakalayo
I-Silicon Simahla Akukho mlinganiselo
Ilebhile ye-PVC yenza umatshini wokuxhasa
I-oveni yemveliso ezenzekelayo
Kutheni ukhetha i-weldo?
Isisombululo kunye namatyala
Umatshini wokubeka wedayimane obonakalayo
Imveliso yerabha ethambileyo
Imveliso yerabha yerabha
I-TPR I-GRP yeHlabathi yeRubat
Imveliso ye-rubber ye-rubbever
I-Rubber Charchain Deod
I-Rubber Iggimer Imephu yokwenza
Umatshini werabha yerabha
Amaqhosha e-enamel ezizenzekelayo ze-enamel
I-Shoight yokupeyinta ipeyinti yepeyinti
Ipeyinti yokuFunda ngokuZenzekelayo
Umatshini obonakalayo obonakalayo kwi-injini ye-injini
I-enamel ebonakalayo ebonakalayo | I-Souvenir yeSouverir
Umatshini wokuphepha umatshini wokupeyinta
Cacisa i-crystal story
I-mosaic domation sticker umatshini ozenzekelayo ozenzekelayo
I-Epoxy sticker | Umatshini weLeabel Doing
Ingubo yangaphantsi yomatshini we-tag
Umatshini wokuzima kwe-Epoxy amaqhosha
Cacisa i-Epoxy ye-Epoxy Consedchain | Iingqekembe
Ishishini le-elektroniki laseKhaya
Ukuveliswa kwe-Smart kuqala nge-WElDO
INkokeli kutshintsho lobuchwephesha bemishini yobuchwephesha
Ngamava eminyaka etyebileyo kushishino, iWELDO ijolise koomatshini bokuhambisa abazenzekelayo kunye noomatshini bokufaka imibala. Sele sidlulile isiqinisekiso sekhwalithi esemgangathweni ye-ISO9001 kwaye sinamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nelungelo lokushicilela isoftware. Inkampani yethu isidlulisile isatifikethi seshishini esithambileyo, inqanaba lobuchwephesha kunye nomthamo wentengiso ufikelele kwinqanaba eliphambili kushishino.
Isikhululo esiphindwe kabini somatshini wesantya esiphezulu
Ukusetyenziswa: 1.izilungele iintlobo zezinto ezingamanzi, ezinje ngepeyinti yokubhaka, i-epoxy resin AB iglu, i-enamel, iglu ye-UV, i-silicone ye-elektroniki, iglu yekristale, i-inki yeplastiki, i-inki yentsimbi, i-EMI iglu conductor, indibaniselwano yokuqhuba, iglu yangoko, iglu yokuphosa, Unciphiso lwe-solder, i-lubricant, iglu yesilivere, iglu ebomvu, uncamathisela ubushushu, unamathisela ukuthintela imbalela, ipeyinti ebonakalayo, isikrweqe sokulungisa iarhente, i-PU resin, iglu ephantsi / embindini we-viscosity, njl. 2.inokusetyenziselwa ukuhambisa izinto ezingamanzi kwizinto ezahlukeneyo zomsebenzi, ezinje ngesinyithi, iplastiki, amaplanga, izitikha njalo njalo.
I-Weldo 5 imibala yePVC / ilebheli yesilicon umatshini wokuhambisa ngokuzenzekelayo
Iimbonakalo: 1 Ngenisa ifayile yeJPG kwisoftware kwinkqubo yokuhambisa umkhondo. Sebenzisa inkqubo yekhompyuter, isoftware ibonakala ngokucacileyo, efanelekileyo kwaye iyakhawuleza. Umlomo umlomo 3.Single okanye ngemilomo emininzi ingasetyenziswa ngokungqinelana imveliso eyiyo. Ubukhulu bemilomo emi-5 esebenza kunye ukuphucula imveliso. 4.Up ukuya kuma-8 amaqhosha amfutshane enkqubo, isuti yeenkqubo ezininzi zemveliso. Emva kokuba inkqubo icwangcisiwe, inokugcinwa kwikhompyuter kwaye isebenze ngokusisigxina. Xa imveliso ifuna ukwenziwa kwixesha elizayo, inkqubo inokubizwa ngokuthe ngqo ngaphandle kwenkqubo yesibini. 6.Dispensing ngumngundo ezimbini ngaxeshanye kunye nokuvunda umsebenzi indawo. I-7.Suit inzima kwaye inexabiso eliphezulu elongeziweyo nge-PVC kunye neemveliso zesilicone. Ukuveliswa kwe-8 ngokukhawuleza, umatshini omnye ulingana nabasebenzi aba-3 ukuya ku-5, abanokunciphisa kakhulu ixesha lokuhanjiswa kweodolo. 9 Ngokuzinzileyo yenza iimveliso ze-PVC / abicah, umgangatho ophezulu, inqanaba elinesiphene esiphantsi, kunokunceda ukunciphisa iindleko. 10.Software kunye nokusebenza komatshini kulula ukuyifunda, kunokunceda ukunciphisa ixesha loqeqesho. Inkqubo yokuprograma: ichaphaza, umgca, iarc.
Weldo 12 imibala PVC / Silicon ileyibheli umatshini kwisixhobo oluzenzekelayo
Iimbonakalo: 1 Ngenisa iJPG okanye ifayile ye-DXF kwisoftware kwinkqubo yokuhambisa umkhondo. Inkqubo ye-2 yeFlexible, inokuthi kubathengi ifune ukukhetha iinkqubo zekhompyuter okanye ukufundisa inkqubo yebhokisi (efanelekileyo). Umlomo umlomo 3.Single okanye ngemilomo emininzi ingasetyenziswa ngokungqinelana imveliso eyiyo. Imilomo eyi-Max12 esebenza kunye ukuphucula imveliso. 4.Up ukuya kuma-8 amaqhosha amfutshane enkqubo, isuti yeenkqubo ezininzi zemveliso. Emva kokuba inkqubo icwangcisiwe, inokugcinwa kwikhompyuter kwaye isebenze ngokusisigxina. Xa imveliso ifuna ukwenziwa kwixesha elizayo, inkqubo inokubizwa ngokuthe ngqo ngaphandle kwenkqubo yesibini. 6.Dispensing ngumngundo ezimbini ngaxeshanye kunye nokuvunda umsebenzi indawo. I-7.Suit inzima kwaye inexabiso eliphezulu elongeziweyo nge-PVC kunye neemveliso zesilicone. Ukuveliswa kwe-8 ngokukhawuleza, umatshini omnye ulingana nabasebenzi aba-3 ukuya ku-5, abanokunciphisa kakhulu ixesha lokuhanjiswa kweodolo. 9 Ngokuzinzileyo yenza iimveliso ze-PVC / abicah, umgangatho ophezulu, inqanaba elinesiphene esiphantsi, kunokunceda ukunciphisa iindleko. 10.Can kudityaniswe irobhothi ukwenza umgca wemveliso oluzenzekelayo ngokupheleleyo, ezinokuvelisa ngokuzenzekelayo nokunciphisa iindleko zabasebenzi. 11.Software kunye nokusebenza komatshini kulula ukuyifunda, kunokunceda ukunciphisa ixesha loqeqesho. Inkqubo yokuprograma: ichaphaza, umgca, iarc.
Weldo 18 imibala PVC / Silicon ileyibheli umatshini kwisixhobo oluzenzekelayo
Isicelo semveliso: Iimveliso 1.Gift 2.Keychain, bar mat, coaster indebe, imithwalo tag, Pen umqhubi case, I-3Silicone cae ephathekayo, iwotshi yesilicone, isihlakala sesilicone, umnini wefowuni yePV, umnxeba webhotile wePVC. Isixhobo sokutsala izipper, ibheji yerabha, izihlangu ezingaphezulu, iihakethi kunye nezitshixo zokujija I-5.Iziqwenga zokugubungela, i-TPR yokuchasana kwezihlangu kwiiglavu, izihlangu kuphela
Itekhnoloji yokuvelisa ezenzekelayo, umsebenzi okhululayo, ukonga abasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza!
I-WELDO ibonelela ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu zokuhambisa iglu, isisombululo setekhnoloji esenziwe ngobuchule kunye nesenzelwe wena ukunceda abathengi bandise ubhetyebhetye beshishini, basebenzise imveliso ngokufanelekileyo kwaye bafezekise iinjongo zokuzinza, benze oomatshini abazenzekelayo kunye nezixhobo bandise ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokuzinza kwemveliso, ukutshintsha iindleko zokuvelisa kunye nokunyusa inzuzo.
Izixhobo ze-WELDO esizisebenzelayo zibonelela ngeendlela zokuhambisa umatshini kunye ne-scara robot kubathengi behlabathi, imveliso yethu isetyenziswa kakhulu kwi-elektroniki, iimoto, izixhobo zasekhaya, izixhobo zezihlangu, izitikha, izithuthuthu, iplastiki yedriphu, iibheji zekhompyutha, izipho zezacholo, iiwotshi, ukutya, igalufa, Ubugcisa besikhonkwane, izixhobo zefowuni eziphathwayo, iiglasi, kunye nezinye iinkalo Abathengi bexesha elide babandakanya iMidea, iHuawei, iGree, iSkyworth, iHaier, kunye nezinye iinkampani zeFortune 500 kunye nenani elikhulu lokuvelisa amashishini amancinci naphakathi.
Imveliso yeleyibhile yomatshini onesantya esiphezulu
Imveliso yelebheli yesantya esiphezulu somatshini
Isantya esiphezulu somatshini weemveliso zokuqaqamba okuphezulu
Isantya esiphezulu somatshini weemveliso zokuqaqamba okuphezulu kweArc
WEIDO Faka umbala kwileyibhile yesithuthi kumatshini wesantya esiphezulu
I-WELDO yasekwa ngo-Matshi 2007.
I-WELDO yinkampani yetekhnoloji ejolise kuphando nakuphuhliso, imveliso, kunye nokuthengiswa kwezixhobo ezizenzekelayo zokwenza imveliso yokulawula ulwelo, njengokuhambisa iglu ngokuzenzekelayo, ukuhambisa iplastiki, imibala kunye neevalvu zenaliti. Udidi lwethu oluphambili kubandakanya ukuhambisa umatshini kunye ne-scara robot, njl.
Ukubonelela ngemveliso ekhokelayo kwitekhnoloji yokuvelisa, ubungcali, ukugqibelela, ukuthengisa kwangaphambili, ukuthengisa, inkonzo yasemva kokuthengisa, izisombululo zesicelo sobuchwephesha esenzelwe ubuqu, ukuvelisa ukubonwa okuzenzekelayo.
Nxibelelana nathi ukuze ufumane ezinye izisombululo zeshishini
Ukuyila kunye nokuphanda kunye nokuphuhlisa izisombululo zobukrelekrele ezibonelela ngexabiso leshishini kumashishini ngokweemfuno zabo.